Tu Tu Tha: tag 5
မနေ့မနက်က မယ်နန်းညီက ခြိမ်းခြောက်တယ် .... တခုတက်ဂ်မယ်နော်တဲ့ ... ပြီးတော့ နောက်မှာ ဟီဟိ ဆိုတာကပါသေး။ အလုပ်ရှုပ်နေရတဲ့ကြားထဲ ဒီကလေးမ ဘာပါလိမ့်ပေါ့လေ။ တက်ဂ်ချင်လည်း တက်ဂ်ပေါ့ ... ဒီလိုနဲ့ ညဘက်ကျတော့ မောင်ဗီလိန်ကလာပြန်တယ် .. လာမည့် ၆ နာရီအတွင်း အင်အား အသင့်အတင့် ရှိသော တက်ဂ်တခု လာဖွယ်ရှိတဲ့။ ဟာ ဒီကောင်တွေ သိပ်မရိုးဘူးလို့ စဉ်းစား နေတုန်း ဖိုးဂျယ်တယောက်က တခါလာပြန်တယ် သူ့ဆီကိုလည်း အဲလိုပဲလာပြောတယ်တဲ့။ ပျော်တယ် ဆိုပဲ။ သတိပြန်ပေးလိုက်ရတယ် သိပ်မပျော်နေနဲ့ ဒီကောင်တွေ မဟုတ်တာ ကြံစည်နေပုံရတယ်လို့ ...။ ဒီနေ့ကျတော့ တက်ဂ်လိုက်ပြီတဲ့ လာပြောလို့ သွားကြည့်လိုက်တော့ တကယ်ပါပဲ မတရားသဖြင့် ပြိုင်တူ တက်ဂ်ထားလိုက်တာ။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအရာကြည့်လိုက်တော့ တော်တော်ပျော်သွား တယ်။ အကြိုက်ဆုံးကာတွန်းကားတဲ့ ...။ ဒါမျိုးကတော့ တူးတူးသာတို့က လာထားပဲ။ ကာတွန်းကား တွေကို မလွတ်တမ်းကြည့်ထားတာ ဘယ်ရမလဲ။ သူတို့ မတရားသဖြင့် တက်ဂ်ထားတာကို ကိုယ်က တရားသဖြင့် ပြန်ရေးပေးလိုက်မယ်။ လာလေရော့ ... မယ်နန်းညီနဲ့ မောင်ဗီဗီရေ ... ညည်းတို့ တက်ဂ်ထားတဲ့ တခြားသူတွေက ဘာတွေရေးမလဲဆိုတာ နောက်မှကြည့်တော့မယ်။ တူရင်လည်း အကြိုက်ချင်းတူတယ်ပဲ မှတ်လိုက်တော့ဟေ့ ... ရေးပြီနော် ...။
ကာတွန်းကားထဲမှာတော့ မကြိုက်တဲ့ကားက ခပ်ရှားရှားပါ။ ကျမက သရီးဒီထက် တူးဒီကာတွန်း ကားလေးတွေကို ပိုကြိုက်တယ်။ ဝေါ့လ်ဒစ္စနေရဲ့ ကာတွန်းတွေဆို အကုန်ကြိုက်ပဲ။ လိုင်းယင်းကင်း ဆိုရင် ခဏခဏ ပြန်ပြန်ကြည့်လည်း မရိုးဘူး။ ကာတွန်းကားတွေကို အဓိက ကြိုက်ရခြင်းက အဲဒီထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်းတွေ ကောင်းလွန်းတာလည်း တကြောင်းပေါ့။
ပိုကာဟွန်းတက်စ် ဇာတ်လမ်းကလေးက အင်္ဂလိပ် ပုံပြင်တပုဒ်ကို အခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ ချစ်စရာ ကာတွန်းကားလေးပါ။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ ပိုကာဟွန်းတက်စ် ဆိုတဲ့ အင်ဒီးယန်း မလေးနဲ့ သင်္ဘော ကက်ပတိန် ကောင်လေး ဂျွန်စမစ်သ်တို့ရဲ့ ရိုးရိုးအချစ်ဇာတ်လမ်းလေး.. တပုဒ်ပါပဲ။
ပိုဟွာတန် အင်ဒီးယန်းလူမျိုးစုတွေ သဘာဝအတိုင်း အမဲလိုက်၊ ငါးရှာ ... စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ပြီး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေတဲ့ နေရာကို ရွှေတူးတဲ့ဗြိတိန်လူဖြူတသိုက် ရောက်လာပါတယ်။ အဲဒီလူဖြူတွေ စီးလာတဲ့ သင်္ဘောရဲ့ ကက်ပတိန်လေးက ဂျွန်စမစ်သ်ပါ။
ပိုကာဟွန်းတက်စ် ဆိုတဲ့ အသားညိုညို၊ နက်မှောင်ဖြောင့်စင်းတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးတွေရဲ့ ပိုင်ရှင်၊ မျက်နှာကျ လှလှ ကောင်မလေးက ပိုဟွာတန် အကြီးအကဲရဲ့ သမီးပေါ့။ သူ့အဖေက သူတို့ လူမျိုးစုထဲက စစ်သူကြီးကောင်လေးတယောက်နဲ့ ထိမ်းမြားပေးဖို့ သဘောတူထားပြီးပြီ။
သဘာဝတောတောင် အလှတွေရဲ့ကြားမှာ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ကြီးပျင်းလာရတဲ့ ပိုကာဟွန်းတက်စ် ဟာ အပြေးမြန်သလောက် ရေကူးလည်းတော်၊ လှေလှော်လည်း ကျွမ်းကျင်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအရ ပိုကာဟွန်းတက်စ်နဲ့ ဂျွန်စမစ်တို့ ချစ်ကြိုးသွယ်မိပြီး ... နောက်မှာ အဲဒီကိစ္စကို ပိုကာဟွန်းတက်စ်ရဲ့ အဖေကြီးသိသွားပါတယ်။
သူတို့မြေပေါ်မှာ ရွှေလာရှာတဲ့အဖြူတွေကို ကြည့်မရတဲ့ကြားထဲ သူတို့ရဲ့ကွမ်းတောင်ကိုင် အလှပဂေးကိုပါ သိမ်းပိုက်မယ့် အဖြူတွေကို အင်ဒီယန်းတွေက ရန်ပြုရာက တဖက်က ပြန်လည် တိုက်ခိုက်တာကြောင့် အင်ဒီယန်းစစ်သူကြီးလေး ဒဏ်ရာရသွားသလို ဂျွန်စမစ်ကိုလည်း အင်ဒီးယန်း တွေဘက်က ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
အဲလို ရှုပ်ထွေးမှုတွေကြောင့် တဘက်နဲ့တဘက် စစ်ကြေညာတဲ့အထိ ဖြစ်ကုန်ကြတယ်။ ရွှေရှာဖို့ သင်္ဘောငှားလာတဲ့ သူဌေးက အဆင်အခြင်နည်းပါးသလောက် သူတို့မှာပါတဲ့ သေနတ်တွေကို အားကိုးသလို သူ့အလုပ်သမားတွေရဲ့ အင်အားနဲ့ အင်ဒီယန်းတွေကို မိုက်မိုက်မဲမဲ စိန်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ ပိုကာဟွန်းတက်စ်က သူတို့ရိုးရာရုံကြည်အားထားကြတဲ့ ဖွားဖွား သစ်ပင်ဆီ ရောက်နေပါတယ်။ ဖွားဖွားရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့ ဒီစစ်ကို သူတားတော့မယ်။ တကယ်လို့သာ တဘက်နဲ့တဘက် စစ်ဖြစ်ကြရင် သူတို့အားလုံး သေကြဖို့ပဲ။ သူ့အဖေရဲ့ ဒေါသ ...၊ သူတို့ဘက် ဆိ်ုပေမယ့် ရန်သူ့လက်လို့ ဆိုနိုင်တဲ့သူတွေ လက်ထဲရောက်နေတဲ့ ချစ်သူ ... တဘက်က သူတို့လူမျိုးတွေ ချစ်တဲ့မြေကြီး ... ဒါတွေကို သူ ဆုံးရှုံးရတော့မယ်။
နောက်ဆုံးမှာ ပိုကာဟွန်းတက်စ်ဟာ စစ်ကိုတားနိုင်ခဲ့သလို ... သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ချင်းမေတ္တာကို စစ်ဆာ နေတဲ့သူတွေ မလွန်ဆန်နိုင်တော့အောင် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းက သာမာန်အချစ်ဇာတ်လမ်းဆိုပေမယ့် အဓိက ကျမနှစ်ခြိုက်မိတာက ဇာတ်ပို့တွေရဲ့ အင်အားရယ်၊ နောက်တော့ ဇာတ်ဝင်သီချင်းတွေရယ်ပါ။ ပိုကာဟွန်းတက်စ်ရဲ့ အရိုင်းဆန်တဲ့ ဘဝနဲ့ အလှကို ပြနေတဲ့အချိန်ဟာ ဇာတ်ဝင်တေးကြောင့် ပိုပြီးရုပ်လုံးကြွလာတယ်။ နောက်တနေရာကတော့ နှစ်ဘက် စစ်ပြင်နေတဲ့အချိန် မြူးကြွတဲ့ သီချင်းပါ Savages ဆိုတဲ့ သီချင်းပေါ့။ အဲဒီသီချင်းသံနဲ့အတူ လူတွေကိုမပြဘဲ အရိပ်တွေကိုပဲ ပြနေတာကိုက တကယ်စစ်တိုက်ကြတော့မလားလို့ အသည်းတယားယား ဖြစ်စေပါတယ်။
အင်ဒီယန်းတွေဘက်က ဂျွန်စမစ်ကို ရှေ့ဆုံးကနေ ဓားစာခံအဖြစ် ကြိုးနဲ့တုတ်ပြီးထွက်လာ ... ပိုကာဟွန်းတက်စ်က တောထဲကနေ ဖြတ်လမ်းက မီအောင်ပြေးပြီး နှစ်ဘက်ကြားကိုရောက်နေတဲ့ ချစ်သူရဲ့အပေါ်က ကာကွယ်ပြီးမှောက်လိုက်တဲ့ အချိန် ... နှစ်ဘက်စလုံး မင်သက်နေတုန်း အဖြူတွေဘက်က အဆင်ခြင်မဲ့တဲ့ သူဌေးက သေနတ်ကို ပိုကာဟွန်းတက်စ်ရဲ့ အဖေဆီ ချိန်ပြီး ခလုပ်ဆွဲချလိုက်ပါတော့တယ်။
အဲဒီမှာပဲ အဖိုးကြီးရှေ့ကနေ ဂျွန်စမစ်သ်က ဝင်ခံပေးလိုက်တဲ့အတွက် ဂျွန်စမစ်သ်ကိုချစ်တဲ့ ရွှေတူး အလုပ်သမားတွေအားလုံးရဲ့ ဒေါသဟာ သူဌေးဆီကို မြားဦးပြန်လှည့်ခဲ့ပါတယ်။
ချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့် စစ်မဖြစ်တော့သလို ... မတရားတဲ့သူကို သူ့ဘက်သားတွေကအစ မလိုလားဘူး ဆိုတာ လေး ကျမခံစားမိပါရဲ့ (ရုပ်ရှင်ဆိုတော့လည်း အဲ ပေါ့လေ)
ဇာတ်ပို့တွေထဲမှာ တိရိစ္ဆာန်ကလေးတွေလည်း ပါတဲ့အတွက် ချစ်စရာ သိပ်ကောင်းတာပဲ။ ကာတွန်း ရုပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ့်လူ့ဇာတ်လမ်းမှာ မဖြစ်နိုင်တာတွေကိုပါ ထည့်ရေးလို့ရတာ အားသာ ချက်ပေါ့နော်။
နောက်တခုက ဟောလီးဝုဒ် ကာတွန်းကားတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ကာတွန်းရုပ်ကလေးတွေနေရာမှာ စကားပြောတဲ့သူတွေက တကယ့်ဟောလီးဝုဒ် သရုပ်ဆောင်ကြီးတွေလေ ...။ ဂျွန်စမစ်သ် နေရာမှာ မင်းသားကြီး မဲလ်ဂစ်ဘ်ဆင်က သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ပိုကာဟွန်းတက်စ်အဖြစ်ကတော့ အိုင်ရင်းဘတ်ဒတ်က သရုပ်ဆောင်ပါတယ်။
“ရွှေ ... ဟုတ်လား အဲဒီရွှေက ဒီပြောင်းဖူးလို စားလို့ရလား။ ပြောင်းဖူးလောက် တန်ဖိုးရှိလို့လား” ဆိုတဲ့ ပိုကာဟွန်းတက်စ်ကလေးကို မကြည့်ရသေးရင် ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။ နန်းညီနဲ့ ဗီဗီတော့ ကျေနပ်မယ် ထင်ပါရဲ့။
ကဲ တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားအရ ဆက်တက်ဂ်တော့မယ်။ သိပ်များများမတက်ဂ်ဘူး တကယ် ရေးမယ်ထင်တဲ့ ၃ ယောက်ပဲတက်ဂ်မှာ.. ၁။ ဘေးတိုက်သွားတဲ့ ဂဏန်းကောင်လေး ဂျူလိုင်ဒရင်းမ် ၂။ ကာတွန်း ကားတွေကို ကြီးတဲ့ထိကြည့်တုန်းဆိုတဲ့ ယောနသံဇင်ယော် ၃။ ဒီတယောက်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ချစ်ရတဲ့ အစ်မ မမိုးချို (ဟီဟိ အစ်မက ကာတွန်းကားကြည့်တဲ့ရုပ်ပေါက်လို့ တက်ဂ်တာနော်) ကဲ ... ရေးပေးကြပါဦး။
Saturday, November 22, 2008 | Labels: tag |
This entry was posted on Saturday, November 22, 2008 and is filed under tag . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
အဲ...Tag ခံရပြီ.. ... ဒါပထမဆုံး Tag ခံရခြင်းပဲ.. ပျော်တော့ပျော်သား... ကာတွန်းတွေ အကြောင်းရေးရမယ်ဆိုလို့ ..
ကာတွန်းတွေလဲ ကြိုက်သလို အခု ခေတ်စားတဲ့ ဗီဘာလီ ဟီးလ် ချီဝါးဝါးလဲ ကြည့်စေချင်ပါတယ် ကြိုက်မှာပါ.
အဲဒီကားထဲက ဇာတ်ဝင်သီချင်း အရမ်းကိုကြိုက်တာဗျ။
Colours of the Wind လေဗျ။ ကျနော် အရမ်းအရမ်းကိုကြိုက်တာ။
ကျွန်တော့်ကိုတော့ ပြောင်းဖူး မပေးနဲ့။ ရွှေပဲ ပေးပါနော်။ ပြီးမှ ရွှေကို ရောင်းပြီး ပြောင်းဖူး ၀ယ်စားမယ်လေ။
(ဆိုလိုချင်တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို သိတယ်။ သိရဲ့သားနဲ့ ရစ်တာ။ ဒါပဲ။)